Date My Pet » 3 Soso-kevitra hamoronana The Best Online Dating Profile
3 Soso-kevitra hamoronana The Best Online Dating Profile
Last nohavaozina: Nov. 25 2020 | 2 min namaky
Mametra ny mampiaraka ny mombamomba an-tserasera dia afaka ny ho sady ny Fivoahan'ny ary taitra hevitra indray mandeha. Mazava ho azy fa ny fientanam-po dia avy amin'ny eritreritra fa angamba mety hihaona fotsiny fa amin 'ny alalan' ny olona iray manokana toa sisin-tsy aterineto. Ny horohoro dia avy amin'ny eritreritra ny hanontany tena tsara ny zavatra tokony nataony tao ny mombamomba. Raha toa ka ianao toy ny ankamaroan'ny olona, angamba ianao te-handroso fanehoana tsara indrindra ny tenanao, nefa zareo ka tsy fantatro ny fomba hanaovana izany. Izay mamaritra ny tenanao dia mety ho hafahafa sy mampisafotofoto. Na dia mety ho toa kely toy ny nanoratra ny taratasy ho fonony asa fampiharana, ny zava-mitoetra fa tena miezaka ianao mba hanaisotra ny amin'ny mety ho daty-tsy mety mpampiasa! Noho ny famoronana ny azony mihitsy hoe mampiaraka ny mombamomba an-tserasera, misy raha ny marina ireo orinasa maro hanolo-tena tanjona iray, dia ny fanoratana ny fiarahana aterineto mombamomba. Soa ihany, misy fomba maro izay afaka ny mombamomba anao manokana / "momba ahy" fizarana mahaliana kokoa, nefa tsy mba handoa ny "matihanina" mba hanao izany ho anareo.
Lazao Stories: Angamba iray amin'ireo zava-dehibe indrindra ny mombamomba-soratra soso-kevitra mba hahatsiaro, tantara milaza ny mombamomba azy ao amin'ny tena iray dia voaporofo, mba hitarihana ny olona ny faniriana, fara fahakeliny, hahafantatra bebe kokoa momba anao. Fanambarana toy ny hoe "tsara aho, mahafinaritra, sahisahy bandy ", ary raha ny marina dia asehon'ny levitra firy momba ny olona. Na izany aza, misafidy ny hanome tantara fohy hisolo tena ny tsirairay avy amin'ireo filazalazana dia hahatonga anao tsy hay hadinoina sady be kokoa mahaliana. (Ohatra, "Indray andro rehefa any ambanivohitr'i Ghana ..."). Mazava ho azy, Tena ilaina ny mitandrina ireo tantara fohy; tsy ho foana izany mora foana ny mombamomba readable, izy io, sady manome fahafahana tsara dia tsara ho an'ny lohahevitra ny resaka ho an'ny daty ("... Noho izany milaza bebe kokoa momba izany fotoana ..."). Fomba iray hafa manao izany dia ny hanome ohatra ho an'ny tsotra manokana levitra fanambarana. Ohatra, nanao hoe: "Indray andro any aho dia mety hahatonga anao ny sonia sy ny taolan-tehezany BBQ coleslaw" tsy hay hadinoina sady kokoa noho ny hoe personable, "Tena te-mahandro ivelany teo amin'ny grill."
Asao Questions: Ny fanaraha-maso ara-dalàna ho any amin'ny teboka voalohany, ho azo antoka fa ny mampiaraka ny mombamomba ny olon-kafa dia manome fahafahana mba hanontany anareo fanontaniana. Na voalaza mivantana (toy ny ao amin'ny, "Aza misalasala manontany ahy bebe kokoa mikasika ny ...") na fotsiny tsimoramora Te hilaza, ny profil izay manasa nanontany an-tsipiriany momba anao ianao dia mampiseho fa misokatra, manasa olona koa. Raha lazaina amin'ny fomba hafa, raha ny fomba ny mombamomba izay voasoratra ao feo tonga lafatra tanteraka ary nikatona eny, dia mety hihevitra ny hafa izany ny fomba koa ianao. Ataovy ny safidy mampiaraka misokatra amin'ny maneno toy ny misokatra, manasa olona ny tenanao.
Manaova ny marina: Farany, ny fahamarinan-toetra dia mazava ho azy fa zava-dehibe ny tsy mahomby ingredient mampiaraka traikefa, na amin'ny aterineto na tsia. Raha ny mombamomba voasoratra amin'ny fomba toy ny overemphasize traikefa na "fahaizany" izay manitatra ny zava-misy fotsiny, fijerena ny mombamomba ny hafa dia mety ho afaka hilaza ela na ho haingana. Tsy manao ny tsy marina dia ny fifampiresahana tsara hanombohana tongotra eny amin'ny. Na izany aza, Tsy midika izany fa dia tena ilaina tokoa ianao manome fampiharihariana feno momba ny ambaratonga ambony rehetra sy ny fananany na an-tserasera. Ohatra, tsy te haneho ny asa amin'izao fotoana izao noho ny tahotra fa ny hafa mety mikatsaka ny hiaraka aminao noho ny vola miditra fotsiny no antony ny fotsiny, "Ao amin'ny sehatry ny fitsaboana", fa tsy "taolana i mpandidy" nisy ny filazalazana. Raha izany dia, tsy nisy ezaka natao mba iza ianao feo "tsara kokoa" noho ny zava-misy.
Online Dating: Fialana Being Catfished
6 Antony Nahoana Tsara Health no tsara Fifandraisana